Al-Shabaab,Towxiidka, Shareecada iyo Muslimiinta.
February 6, 2012 - Written by
Towxiidka waa kalmadda furaha u ah Islaamnimada, macnaheeduna waa, in cid xaq lagu caabudo ayan jirin Illaaha weyn maahee, qeybta kalena waa, in Nabi Muxamad loo qiro inuu yahay rasuulkiisa. qofku marka uu intaas ku dhawaaqana waa qof Muslim ah oo Illaahay rumeeyey, wixii intaas ka dambeeyana waxaa laga rabaa inuu la yimaado ficiladii kale ee Musli miinta laga rabay, sida Salaadda, Zakada, “ciddii awoodda” Soonka, iyo Xajka, qofkii intaas la yimaadana waa Muslim dhiiggiisa iyo maalkiisa in la nabad galiyo la doonayo.
Shareecada Islaamka waa qaanuun dhameystiran oo Illaahay ugu talagalay inay aadanuhu weheshadaan inta ay adduunka saaran yihiin, iskuna dhaqaan, isla markaasna ay ku jirto danta aadanaha adduun iyo aakhiroba. Muslimiintu waa dadka qiray kalmadda Towxiidka, ka dibna ku daray falalkii kale ee Islaamku amray, sida Salaadda iyo Soonka, Zakada iyo Xajka ciddii awoodda, 5 taas tiirna waa kuwa ay ku taagan tahay Islaamnimada.
Al-Shabaab, iyagu shareecadii maaha oo ciddii iyaga la colowda shareecada inay col la tahay kama dhalaneyso. sidoo kale iyaga Muslimiinta oo dhan ma matalaan, meel iyaga lagu doortay oo umadda inay hoggaamiyaan loogu wakiishayna majirto, waa dad muslimiinta ka mid ah, sax iyo qaladna leh, su’aalo badanna waxaa ay ka furan yihiin halka ay umadda ku wadaan, wax yar su’aalahan ila fiiri.
9-Haddii Nabi Muxamad (SCW) ka bari noqonayey qaar ka mid ah ficiladii ay saaxiibadii sameeyeen, maxaa loo maqli waayey Al-Shabaab oo ka cudur daaranaya wax ay haleeyeen?
2 comments on “Al-Shabaab,Towxiidka, Shareecada iyo Muslimiinta.”
Mohamud SHire on February 10, 2012 at 9:24 pm said:
A.c. aad ayuu u mahadsan yahay wadaadka maqaalkaas qoray waxa uu iftiiminayana waa wax u baahan in uu qof waliba iswaydiiyo wa arrin saldhig u ah islaannimada iyo wanaageeda tusinaysana in muslinnimadu ay tahay wax dadka islaamka ah u dhaxeeyee ayan qolo ama koox gaar u ahayn.
waxaase xasuusin mudan inta hadda alshabaab wadaadku ku sheegay waa intii ay la soo baxeen culimadii Al Itixaad Hadana aan umalaynayo badankoodii in ay noqdeen Al ictisaam qaladku ma ahan mid ka billawday alshabaab ee waa ka horreeyey kuwa maanta soomaalida dhexdeeda ugu caansan culimoo ahaan ayaa fikirkaas qabay marka ictisaam ,itixaad,islaax,Tabliiq,Salafiyatul+jadiidah iyo kuwo kale oo aan hilmaamy magacyadooda isku noqda halla yiraahdo oo adinkaa waxaan keenaye xalliya W:C
Osman saciid on February 7, 2012 at 5:08 am said:
Waa xaqiiqo arinka hadalka ku qoran maqaalkaan, alshabab xarakada la baxaday ee xagjirga ah waxayabaha ay la gooni noqdeen ayaa kamid ah in ay towxiidka u dejeteen xerar iyaga u gooni ah, hada kahor iyada oo xaj la joogo ayaan xasuusta ninman fikirka alshabab oo kale qaba oo dadki xujayda ahaa ee kale tuhunsan towxiidkooda, waxay wataan luuxado ama burar ay ku qoran tahay xamalatu ahlu towxiid, qofki aan iyaga kamid aheyn waxaa la oran alaahuma so hanuunin ninkaan waa daal xaa’ir ahe! cajiib ah! dadki towxiidka qirayay oo talbiyada muna iyo musdalifa is qabstay qofka qalbiyadooda tuhunsan oo leh waxaaba ka khaladan maxa lagu tusaleyn karaa? waxaaba la moodaah in towxiidku noqday shay cusub oo fikirka al shabab la socday! akhii ninka maqaalka soo qoray markale mahadsanid sido kale waxaan walaalaha halgan ka codsan lahaa in baaris lagu sameeyo mowduuca al walaa wal bar’aa oo shabaabku cumado oga dhigteen fahamkooda si ay ugu gaalaysiiyaan wixi iyaga aan aheyn,